စောင့်ကြည့်နေလိုက်ပါ - အကောင်းစားကားကို မဲဖောက်ပေးမည့် ပရိုမိုးရှင်းပွဲ လာပါဦးမည်
သင်တို့ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကျွန်ုပ်တို့ကဖြည့်ဆည်းပေးနေပါသည်. ဖောက်သည်တော်တွေရဲ့အိပ်မက်တွေအမှန်တကယ်ဖြစ်လာအောင် ကူညီဖြည့်ဆည်းပေးရတဲ့အတွက်လည်း အရမ်းကိုပျော်ရွှင်ရပါတယ်, ဒီမှာတော့ ယခင်ကဆုရရှိသူတွေရဲ့ စာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်:
ရုရှားမှ Andrei Pakက Audi A4ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်​
ဂျော်ဒန်မှ Mahmood Jassemက Range Rover Evoqueကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်
အင်​ဒိုနီးရှားမှ Ahmadက Mercedes Benz CLS ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်​
ဗီယက်နမ်မှ Nguen Minh Huyက Porsche Panamera ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်
အင်​ဒိုနီးရှားမှ Eka Hadi Dirgantara Putraက Mazda Hoki ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်
အင်​ဒိုနီးရှားမှ Muhammad Agus Salah Kafabillah ကတော့BMW X3ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်
အင်​ဒိုနီးရှားမှ Muhammad Agus Salah Kafabillah ကတော့BMW X3ကားသစ်​ကြီးကို လက်​ခံရရှိသွားပါတယ်.
မလေးရှားနိုင်ငံမှ Mohd Azmi Bin Mohamed Mokhtarကတော့ Mercedes GLAကိုရရှိသွားပါတယ်.
Toyota Fortuner ကားကို အီဂျစ်နိုင်ငံမှ Atef Abu Elhamayed Abdellahက ရရှိသွားခဲ့ပါသည်
သူတို့လိုကံထူးရှင်တွေထဲကမှ တစ်ယောက်အပါအ၀င်ဖြစ်ချင်ပါသလား? FBSရဲ့အကောင်းမွန်ဆုံး နောက်ထပ်ပရိုမိုးရှင်းအစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဆင်နွှဲလိုက်ပါ.
BMW X3 ရယူရန်